के तपाईले आज क्वाँटी खानु भो त ? यस्ता छन् क्वाँटीका १२ फाइदा - Everest Dainik - News from Nepal
के तपाईले आज क्वाँटी खानु भो त ? यस्ता छन् क्वाँटीका १२ फाइदा
काठमाडौं । क्वाँटी नेपालीहरूको भान्सामा पाक्ने झोलिलो खानेकुरा हो। हामीले क्वाँटी विशेष गरेर जनैपूर्णिमाको दिन खाने गर्छौं। यो चना, मस्याङ, मुगी, बोडी, मास, भटमास, ठूलो सिमी, ठूलो केराउ, सानो केराउ लगायतका गेडागुडी मिसाएर बनाएको एक प्रकारको खानेकुरा हो।
बच्चाहरूको वृद्धिविकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
ट्याग्स: क्वाँटी, पोषणविद्, सोफिया उप्रेती